လက်ရှိသတင်းမီဒီယာများ၌ ထွက်ပေါ်နေသည့်သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေမှန်၊ ဖြစ်စဉ်အမှန်အား လေးစားစွာအသိပေးခြင်း – ULA
လက်ရှိသတင်းမီဒီယာများ၌ ထွက်ပေါ်နေသည့်သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေမှန်၊ ဖြစ်စဉ်အမှန်အား လေးစားစွာအသိပေးခြင်း
Posted: June 19, 2017/Under: Statements/By: ULA
လက်ရှိ သတင်းမီဒီယာများ၌ ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြေအနေမှန်၊ ဖြစ်စဉ်အမှန်အားလေးစားစွာအသိပေးခြင်း
၁၃၇၉ ခုနှစ်၊ နံယုန်လပြည့်ကျော် (၉)ရက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈)ရက်
(၁) ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ULA/AA အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊မေလ (၂၂) ရက်၊ စာအမှတ် ၁/၄၀၀၄/ ၀၄၄ / စရခ-၄ ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးညှိုနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (NCCT) မှ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် AA ၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှုရပ်စဲသည့်ကိစ္စအား NCCT အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ထံလိပ်မူပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
(၂) ပေးပို့ရသည့်အကြောင်းမှာ ၎င်းအချိန်ကာလ၌ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေဖြင့် မိမိတို့AA အပါအဝင် ကိုးကန့်၊ တအာင်း သုံးဖွဲ့၏ NCCT ထဲတွင်ပါဝင်မှုအနေအထားအား မသိကျိုးကျွံပြုကာ နိုင်ငံရေးအရ နောက်ကောက်ချန်လိုသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏မရိုးသားသောစိတ်ထားများသိသာထင်ရှားလွန်းခဲ့သည့်အပြင် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ အပြစ်မရှိသော မိသားစုဆွေမျိုးများအားတမင်တကာ အမှုဆင်ပြီး အငြိုးအတေးကြီးစွာ ဥပဒေမဲ့ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းအပါအဝင် အခြားသောအချက်များကြောင့် မိမိတို့ ULA/AA အနေဖြင့် NCCT နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်သည့်ကိစ္စရပ်များတွင် ရပ်စဲကြောင်း တရားဝင် အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၃) ထို့အတူ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၊ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၇) ရက်၊ စာအမှတ် ၅/၄၀၀၅/ ၀၁၃ / စရခ-၄ ဖြင့် UNFC ဥက္ကဋ္ဌ အားလိပ်မူ၍ ၎င်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းနောက်ပိုင်းတွင် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှကိုးကန့်၊တအာင်း၊ရခိုင်သုံးဖွဲ့အား ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ရန်အကျပ်ကိုင်တောင်းဆိုခဲ့သည့်အချိန်၌စကားလုံးအသုံးအနှုန်းတွင် အဆင်မပြေမှုအားအကြောင်းပြကာ NCA လမ်းကြောင်းမှ ဖယ်ချန်ထားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မိမိတို့သုံးဖွဲ့နှင့် ဗမာစစ်တပ်သည်ယခုအချိန်အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသောကြောင့် UNFC အား ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေလိုခြင်း၊ မိမိတို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးတိုင်ပင်နောက်မကျစေလိုခြင်းများကြောင့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားခဲ့မှုမှ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။
(၄) ယခုအချိန်တွင် ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် ULA/AA သည် ၇ ဖွဲ့ပါဝင်သော ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ“Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC) ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ရပ်တည်ကာ မိမိတို့ရခိုင်လူမျိုးများ၏ အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ နစ်နာချက်များနှင့် အခွင့်အရေးများအတွက် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူ တိုက်ပွဲဝင်လျှက်ရှိသည်။
ရက္ခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်/ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် (ULA/AA)
Humbly informing true condition and process regarding news currently appearing on media
United League of Arakan/Arakan Army (ULA/AA) sentaletter, No.1/4004/044/sa.ra.kha-4, addressing to the leader of Nationwide Ceasefire Coordination Team (NCCT) about the issue of the termination of the Arakan Army’s cooperation from the NCCT on 22 May 2015.
The reason We, ULA/AA, sent an official letter for the termination of cooperation in the matters with the NCCT was on the grounds that besides the mindsets of dishonesty of U Thein Sein’s regime became apparent to politically exclude us after U Thein Sein’s regime had disregarded the position of our three revolutionary organizations comprised of the Arakan Army, MNDAA and TNLA’s cooperation in the NCCT on that time including innocent relatives and family members of the Arakan Army soldiers who were plotted to be resentfully and lawlessly arrested and tortured later 29 March 2015 and other facts.
Similarly,we applied foraUNFC membership, by sendingaletter No. 5/4005/013/sa.ra.kha.-4, addressed to the Chairman of UNFC on 17 February 2016. Afterwards U Thein Sein’s regime omitted us from the NCA process, givingareason on uneasiness about the usage of words at the time of coercing our Kokang, Ta’ang and Arakan three revolutionary organizations to releaseastatement. In addition, we stood as an affinity organization after the termination of the membership application in consideration of not to become toaburden on the UNFC because our three revolutionary organizations continue to battle with the Burman armed troops, and not to delay their political negotiation process.
Standing now asamember of the Federal Political Negotiation and Consultative Committee(FPNCC) comprised of seven ethnic armed revolutionary organizations, the United League of Arakan/Arakan Army(ULA/AA) is fighting for the political rights and national losses of our aggrieved peoples of Arakan hand in hand with allied forces.
United League of Arakan/Arakan Army(ULA/AA)